Tigray conflict threatens to ‘catalyse’ tensions elsewhere in Ethiopia – Kichuu
HomeNewsWorldTigray conflict threatens to ‘catalyse’ tensions elsewhere in Ethiopia
(france24)—Aid agencies are unable to bring food and health supplies to Ethiopia’s northern Tigray region, the UN warned on Thursday in the latest sign that the fighting there is intensifying. Analysts say that federal forces are facing a tough opponent in the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), and that the conflict threatens to further destabilise other parts of Ethiopia.
#Via Zelealem Aberra
Barsiisaan Kana Hinjenne!
Isa barii, barii qaddasu
Isa guyyaa, guyyaa tokkosuu
Isa ganama dabtaru
Yeroo inni beekumsa dheebote…
Gaaffii asaasaraan qoru:
“Eeee…haa ta’u maleessaa…
Wangeela kana keessaa
Abboommiin saamaa, gonofaa, jedhu eessaa?
…jedhee yeroo gaafatuun
“Namana maal taateettaa?
Gaaffii doofummaa gaafattaa?
“Amanteen addaggee xeeba caalaa jabaata”
Mammaaksa jedhamu hin dhageenye laataa?
…jedhee deebii barbaacha ijibbaataa.
Egaa…maali laata dubbiin akkanaa?
Naa ’nubatamne jaranaaa
Onnee keessatti malaasu
Waaqaarra taabota roobsu
Bakka hundaatti harcaasu
“Maal? Attamiin?” Isa jedhu sodaan ukkaamsuu
Morma jallisani qollootti ija miixuu
Maqaa Muudamaan of tuulaa xixxiixuu
Kaanis maqaasaatiin fandalala miriixuu
“Bifasaatiin dhalannee…” himachaa
Muldhata qabaachuu himatu
Maqaa isa muudameen baannatu,
Garuu…isa inni hordee dhaabee buqqisu
Duudhasaa qotanii awwaalu
Aadaasaa dhoqqee faalu.
Ogumasaaf kiisii akka baasuu
Arrabasaaniin onneesaa malaasuu
Egerreesaa jiraa ajjeesu.
Maqaa fi ogumasaa jalaa sarbu
Jireenyasaa buqqisani darbu
Bakka isa buqqisan of dhaabu;
“Akkas godhaa…” jedhaaree wangeelarraa?
Muudamaan kana barsiiseeraa?
“Kana maayeessaa…” abboomeeraa?
Iccitisaa naa hiikaa firaa!
Inni garuu… kan hammeenya ganamaan ifate
Lafee obboroo kan nagaan ijaarrate
Hin fincille hin simate
Duudhaarratti duudhaa ijaarrate
Aadaarratti aadaa dabalate
Malee…“ hin simadhu” jedhee yoom mufate?
Simachuusaa gumee mormaan mirkaneessaa
Garuu…jaalalasaa afaankootiin naa galmeessa
Ergaa Muudamaa afaankoon na barsiisaa
Kan Muudamaas kanuma miti dhaamsisaa?
Garuu…inni iddoosaa of buusee tuulamu
“Lakkii… ifaan jechasaa kan himamu
Maqaansaa leemoon kan dubbatamu
Raajiinsaa leellifamee kan faarfamu;
Afaankoon yoo ta’e malee gonkumaa
Zarrraaff…. Imburrrrrr…. mormakootu qalama!”
Jedhanii iyyuun bu’aansaa maali jamaa?
Dubbii xaxani gudunfuun hinfalu
Mayeessamuunsaawoo hin ooluu!
Ofiii…maqaa Muudamaan qaxxisaa
Abbaa lafaa lafasaarraa buqqisaa
Ofiisaani bakkasaa of buusaa
Dhaala mana Muudamaa dubbatu
Jamaa, …kun hoodo akkamiiti jettu?
“Kan amane nifayya…” jennaan, “kan amane ni fayyaa..” abdate
“Izgoo” jedhi jennaan, “Izgoo nu baraari” jedhee kadhate
Fayyina lubbuu fi qaamsaaf ifa jechasaa fudhate,
Garuu, … oolee bulee
Dubbii falfalli of falfalee
Bakka handhuurrisaa itti awwaalamee
“Taabotatu Waaqaa bu’een,”
“Xabalatu burqee yaa’een,”
Aguuggii huurriin gowwoomfamee
Lafasaa jiraa yeroo dhaalamee
Bulee oolee, oolee bulee
Yaadi dubbii ungulaalee
Yeroodhaaf deebii qixaawaan dhibellee
Oolee bulee shirri shirame of saaxilee.
“Yeroo anaaf yandoo taabotaa lolaasu
Isaaniif maaliif tiifullee hin asaasuu?
Xaballi kun eega qeyeekooti burqee maddee
Qeyeesaantii maaf gu’ee maaf burquu dide?
Lakkii… inni taabota qolloorra natti roobsuu
Inni xabala maasiikoo keessaa maddisiisu
Gowwoomsaan lafakoorraa nan buqqisuu…”
Jedhee murteessee yoo amanticharraa baqate
Eenyu kan itti komatamu?… Yaa abbaate!
“Kitaabicha moggaa –moggaatti kan sallaqsine
Hiika jechasaatti kan kaamettoofne
Safuusaatiin hunda olitti kan milkoofne
Hin-muldhannee muldhisuudhaan kan muldhanne
Guddaa olitti guddaa taanee kan guddanne
Hin-amannee amnsiisnee kancuuphanne
Lusifariin salphisuu dhaan kan aarsine
Minitisyoosiin, kn aarsinee gaanfessine
Suraafeliin, kanaamanne itti saganne
Hin-amanneen kan marfamne
Nuyi leemoo fi qulqullu kan taane.”
Kan jedhee adunyaatti kafandise
Waaqarraa taabota yeroo roobsee
Xabala maasii keessa yeroo burqisiiee
Yeroo iyyeessa lafasaarraa buqqisu gatu
“Uggum…! Raajii…” jenne “hinhatinaa!” yeroo hatu.
Shuumabaash bara kaanii, Munxaaz bara sanaa, Buluqubaash barichaa
Primoo Kappitaanoo, Kappo Manipolo, Teneentee baandicchaa
Jireenyi itti dhiyee, dukkanni dukkanee, yeroo gumaa dheessu
Galma Waaqaa seenee yommuttii daaddisu, nama hin dinqisiisu?
Isa kaan dubbiin qalbii akaayee
Bifa kaleessaa ofirraa haxaayee
Takka-takka akka billaacha Tsagaayee
Takkas akka karkarroo boolla of kaa’ee
Takkas ho’ee takka qabanaayee
Takka-takka akka jeedalaa
Takkas akka simbira masqalaa
Kalessarraas, ofisaarraas habararee
Huccuu fi amanteesaa geeddaree
Galma Waaqaa keessa dhokatee
Ijaa gomm’ee dhaabbate
Isaafis ulaan Waaqaa ni banamaa?
Kanaa maal jettu yaa jamaa?
Akka Birchimchim akka Xenfyellesh
Akka Sannaayit akka Bizunesh
Jarreen kommaarii araadaa
Ganamni sirbaa fi ragdaa
Ganamni kolfa, galgalli gaddaa
Moloksee farfaattu galmaa
Gorsitu afaan dammaa
Akka waan “attamnziruu” caccabsaa hindabarree
Dafqa gudeedaan qabeenya hin hammaarree
Isaan maaf jireenya hin buqqaane?
Dabalees… maqaa galchaan yoo hiixatan,… yaa mammiree
Masarichi isaaniifis hinta’aaree?
Yakkamaan gumarraa dheessu
Kan kaleessa soba kafandisu
Hardha barsiisaa ta’ee yeroo barsiisu
Hiikaa jecha Ilmaa fi Abbaa
Abbaa lubbuu, gorsitu lubaa
Aggaafarii mana isa gubbaa
Kun hooda mitii yaa sabaa?
Suurri jalqabaa Dr. Zalaalem Abaarraati. Kaan walaloo sana naa ibsuufan fayyadame.
የጦርነቱ አዛዥ ከጀነራሎቹ ጋር